हस्तक्षेप–साहित्यिक लेखनका एक सदस्यसमेत रहेका मनोज बोगटी, दार्जिलिङका कवि हुन् । बिम्ब गोष्ठी, घाउका रङहरू, पसिनाको छाला, गीतको रिस, आँखाबाहिर, काफरे अमेरिकाजस्ता उनका कवितासंग्रह निक्कै चर्चित छन् । उनको ‘लाइफ अ बटरफ्लाई’ कथासंग्रह भर्खरै निस्किएको छ । बोगटीलाई मन परेका पाँच कविता :
तिमी त यहाँ नचिनिने भएछौ
अगमसिंह गिरीको यो कविता भारतीय नेपालीहरूको ‘एन्थम कविता’जस्तो लाग्छ । पहिचानको खोजी गरिरहेका संसारभरिका जो कोहीका लागि पनि यो कविताले स्पर्श गर्छ । जतिवेला म यो कविता पढ्छु, विश्वभरि आफ्नो अस्तित्वको दाबी गरिरहेका सबै अल्पसंख्यकको लडाइँ सम्झन्छु । नेपाली मूलका र नेपाली भाषी भारतीयले गरिरहेको पहिचानको आन्दोलन र राजनीतिको बीजस्रोत पनि यही कविता हो । भारतमा मुक्तिबोधले ‘तिमी कहाँ छौ ?’ भनेर सोधिरहेका वेला यही कवितामार्फत अगमसिंह गिरीले पनि भारतीय नेपालीहरूलाई ‘तिमी तिम्रै देशमा चिनिने छैनौ’ भनिरहेका थिए । उनीहरूलाई पहिचानको खोजी गर्न यही कविताले सिकाएको हो ।
यो देश मृत्यु उपत्यका होइन
नवारुन भट्टाचार्य, अभिनेता बिजोन भट्टाचार्य र लेखक महाश्वेता देवीका छोरा हुन् । यिनी बंगाली क्रान्तिकारी एवं -याडिकल सौन्दर्यशास्त्रका लागि प्रतिबद्ध लेखक पनि हुन् । जब मैले उनको ‘यो देश मृत्यु उपत्यका होइन’ पढेँ, तब मैले बुझेँ, कवि हुनु भनेको जीवन र समाजको जिम्मेवारी लिनु पनि हो । नवारुन समाजप्रति अनुत्तरदायीलाई घृणित प्राणी मान्छन् ।
७० को दशकमा कलकत्तामा आठजना विद्यार्थीको हत्या गरिएको थियो । उनीहरूको ढाडमा लेखिएको थियो, ‘देशद्रोही’ । नवारुनले त्यतिखेर देशप्रेम र देशद्रोहबीच हुर्किरहेको देशले हातमा हतियार बोक्नु कुनै पनि समाजका लागि स्वस्थकर नरहेको देखे । देश जुन संकटको सम्भावना बोकेर हिँडिरहेको छ र मौन छ समाज, यो जीवन र समाजप्रिय स्थिति होइन । यसैकारण, नवारुनले यो कवितामार्फत समाजप्रतिको उत्तरदायित्वको वकालत गरेका छन् । मलाई यही कविताले समाजप्रति हुनुपर्ने एक कविको प्रतिबद्धताबारे सिकाएको छ ।
अवतारसिंह पासको यो कविता मौन बस्नुको खतराका विषयमा केन्द्रित छ । मानिसले सपना पछ्याउन छाडेका दिन जीवनको कुनै माने रहँदैन । जीवनलाई प्रेम गर्न सपनाले नै सिकाउने हो । जीवनमा प्रेम निभ्नु हुँदैन । जीवनलाई प्रेम गर्नेहरूले नै समाजलाई प्रेम गर्ने हो । समाजलाई प्रेम नगर्नेहरू त मुर्दा हुन् । मुर्दा नितान्त निर्जीव हुन्छ । तर, मानिस जिउँदै पनि मुर्दा हुन्छन् । जो जीवनलाई प्रेम गर्दैन, जो समाजलाई प्रेम गर्दैन, जो संवेदनालाई प्रेम गर्दैन, जो सर्वजनिन अनुभूतिलाई जीवनबाट निषेध गर्छ, ती सबै जिउँदा मुर्दा हुन् । पास भन्न चाहन्छन्– सपना मरेपछि मानिस जिउँदो मुर्दा बन्छ । जिउँदो भइराख्न सपनालाई मर्नबाट जोगाइराख्नु अनिवार्य छ । सपनाका हत्याराबाट सपनालाई कसरी जोगाउने ? त्यसका लागि निरन्तर पढिरहनुपर्ने कविता हो यो ।
सिनान अन्तनुको यो कविता पढ्दा लाग्छ, बगदाद जीवनभरि युद्धको घाउ बोकेर जिउने ठाउँ हो । अशान्ति बगदादलाई बानी भइसक्यो । युद्धले समाजका मूल्य कसरी नष्ट गर्दै जान्छ ? सामाजिक मनोविज्ञानका क्षेत्रमा यसले कसरी खेल्छ ? उनका कविता पढ्दा थाहा हुन्छ । जब मैले युद्ध कविता पढेँ, त्यसले धेरै महिनासम्म बिसञ्चो बनायो ।
आमा कफन बुनिरहेकी छन्, तर पेटको बच्चाको निम्ति जब यो पंक्ति पढ्छु, मलाई युद्धप्रति असाध्यै घृणा जाग्छ । सारा मूल्य नष्ट गरेर युद्धमार्फत देखिएको सपनाको के अर्थ रहन्छ ? कुनै आमा पेटको बच्चालाई लिएर जुन सपना देख्छिन्, त्यो सपना संसारका सबैभन्दा सुन्दर सपनामध्ये एउटा हुनुपर्ने हो । आमाले ससाना खुट्टामा लगाउने मोजा बुन्नुपर्ने हो ।
भर्खर केश उम्रिरहेको टाउकोका लागि टोपी बुन्नुपर्ने हो । मखमली धागोले स्विटर बुन्नुपर्ने हो । तर, बगदादका आमाहरू त कफन पो बुन्छन् ! युद्ध सपना मार्ने हत्यारा हो । कुनै पनि कविले समाज र समयलाई कसरी लेख्नुपर्छ ? समाजको मूल्य स्थापनाका लागि अन्तरविरोधलाई कसरी पाठकसम्म पु-याउनुपर्छ ? यो बुझ्नका लागि पनि म यो कविता पढ्ने गर्छ‘ ।
तिमी के जान्दछौ
निर्मला पुतुल झारखण्डकी आदिवासी कवि हुन् । निर्मला तथाकथित ‘सभ्य’ समाजका विरूद्ध त लडिरहेकी छिन्, आफ्नै समुदायका अन्धविश्वाससित पनि पौँठाजोरी खेलिरहेकी छिन् । ‘तिमी के जान्दछौ ?’ शीर्षकको कविता पढेपछि पितृसत्ताले महिलालाई गर्ने ‘डोमिनेसन’को पल्लो हदसित परिचित हुन पाएको थिएँ । ‘पितृसत्ताको डोमिनेसन’त म सधैँ देखिरहन्थेँ, तर गहिरिएर हेरेको थिइनँ । कुनै पुरुष जब नारीलाई मेसिनका रूपमा लिन्छ, नारीभित्र कसरी विद्रोह उठ्छ र त्यसलाई पितृसत्ताले कसरी दबाउँछ ? यो कविताले सरल बोलीमा धेरै गहिरोसित बताउँछ । निर्मला पुतुल नारीवादीले पछ्याउनुपर्ने कवि हुन् । नेपालीमा निर्मलाजस्ता कवि कहिले आउने होला भन्ने मलाई सधैँ लागिरहन्छ ।